မိမိအိမ္မွာပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီ ..! - APANNPYAY
Home / က်န္းမာေရးက႑ / နည္းပညာမ်ား / ဗဟုသုတအစံု / မိမိအိမ္မွာပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီ ..!
မိမိအိမ္မွာပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးႏိုင္ၿပီ ..!
Apann Pyay 8:59 PM က်န္းမာေရးက႑ , နည္းပညာမ်ား , ဗဟုသုတအစံု Edit
မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို မကြာခဏ ဆရာဝန်နဲ့ စစ်ဆေးချက်တွေ ပြုလုပ်သင့်တယ် ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို မကြာခဏ ရောဂါရှာဖွေ၊ စစ်ဆေးဖို့ အတွက် အချိန်မပေးနိုင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သွာရောက်စစ်ဆေးဖို့ အခက်အခဲ ရှိသူများ အနေနဲ့ ယခုဖော်ပြပေးမယ့် နည်းလမ်းအတိုင်း အိမ်မှာ အလွယ်တကူ စမ်းသပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သန့်ရှင်းစင်ကြယ်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ချောင်း ဒါမှမဟုတ် စတီးဇွန်း အသေးလေးကို ယူပြီး လျှာပေါ်မှာ ညင်သာစွာ ပွတ်ပေးပါ။ လျှာရည်၊ သွားရည်များ ထွက်လာတဲ့ အထိ လျှာပေါ်ပွတ်တိုက် ပေးပါ။ လျှာရည်များနဲ့ စိုစွတ်သွားတဲ့ ဇွန်းကို ပလက်စတစ်အိတ်ထဲ အမြန်ထည့်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် နေရောင်ခြည်အောက် ဒါမှမဟုတ် လင်းထိန်နေတဲ့ မီးအိမ်အောက်မှာ ၁ မိနစ်ခန့် အလင်းရောင် ပြပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ဇွန်းရဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီး သင့်ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ခန့်မှန်းနိုင်ပါပြီ။
အရင်ဦးဆုံး ဇွန်းအနံ့နဲ့ စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ဇွန်းက ပုပ်သိုးသိုးအနံ့ဖြစ်နေရင် အဆုတ်နှင့် အစာအိမ် ကျန်းမာရေး ဂရုစိုက်ပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဇွန်းက ချိုနေပြီး အနံ့ကလည်း ချိုမွှေးမွှေးဖြစ်နေရင် ဆီးချိုရောဂါ လက္ခဏာပါ။ ဇဝက်သာအနံ့ ရနေရင်တော့ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းချင်နေတာပါ။
နောက်ထပ်အနေနဲ့ ဇွန်းအရောင်ကို စစ်ဆေးကြည့်ပါ။ သင့်လျှာရည်နဲ့ ထိထားတဲ့ ဇွန်းနေရာက မရမ်းစေ့ရောင် ဖြစ်နေရင် လေပြွန်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဂရုစိုက်ပါ။ ဒါ့အပြင် ကိုလက်စထရောများလွန်းခြင်းနှင့် သွေးလည်ပတ်မှု ကမောက်ကမ ဖြစ်နေခြင်းကို ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဇွန်းက သိသိသာသာ အဖြူရောင် ဖြစ်နေရင် အသက်ရှူလမ်ကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာပါ။ ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဇွန်းက လိမ္မော်ရောင် ဖြစ်နေရင်တော့ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ချို့ယွင်းနေတာပါ။
အထက်မှာ ဖော်ပြတဲ့နည်းလမ်းက ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်စစ်ဆေးတာလောက် မပြည့်စုံနိုင်ပေမယ့် သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို မကြာခဏ စစ်ဆေးနိုင်ပြီး သတိပြုဆင်ခြင် နိုင်ဖွယ်လောက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီလို ဖြစ်လာပြီဆိုရင် ဆရာဝန်ထံ ပြန်လည်သွားရောက် စစ်ဆေးသင့် ပါတယ်လို့ အကြံပြုလိုက် ရပါတယ်။